အသကျ ၇ နှဈကှာပွီး ခဈြစရာ ကော ငျး တဲ့ တဈဦးတညျးသော ညီမလေး အကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ဘီလီလ မငျးအေး – XB Media Myanmar
တိုငျးရငျးသူလေး အဆိုတျော ဘီလီလမငျးအေး ကတော့ ဂီတနယျပယျမှာ အကောငျးဆုံးကွိုးစား လုပျ ကိုငျနတေဲ့ သူလေးပဲဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ Myanmar idol အဆိုပွိုငျပှဲကွီးမှာ ဝငျရောကျ ယှဥျ ပွိုငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြခငျအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး လ ညျး သီခငျြးသဈတှကေိုဖနျတီး နပွေီး အနုပညာအလုပျတှကေို ဖွညျးဖွညျးခငျြး လုပျကိုငျနေ တာ ဖွဈပါတယျ။
ဘီလီလမငျးအေး က အသားအရေ ဖွူဖှေးနုဖကျနသေလို တမူထူးခွားတဲ့ အလှတရားတှကေို ပိုငျ ဆိုငျထားတာကွောငျ့ ယောကျြားလေး ပရိသတျတှကေလညျး အားပေးဝနျးရံနတော ဖွဈပါ တယျ။ဒါ့အပွငျ သူမလိုပဲ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ညီမလေးတဈယောကျလညျး ရှိပွီး တဈဦးတညျး သော ညီမလေးဖွဈတာကွောငျ့ အဈမဖွဈက ခဈြနရေတာဖွဈပါတယျ။ ယခုမှာလညျး ဘီလီလ မငျးအေး က ပရိသတျတှေ ခဈြအားပိုလောကျအောငျ ညီအဈမနှဈယောကျ ရိုကျထားတဲ့ ပုံလေး ကို တငျပေးလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီပုံလေးတှနေဲ့လညျး ဘီလီလမငျးအေး က ” ကြှနျမမှာသိပျခဈြရတဲ့တဈဦးတညျးသော ညီ မ လေးရှိတယျ…”SISTERS” are different flowers from the garden. ညီအဈမတှေ ဆို တာဥယြာဥျတဈခုတညျးကနပေေါကျဖှားကွတဲ့မတူညီတဲ့ ပနျးနှဈပှငျ့ဖွဈတယျ….. ဒါပမေဲ့နှ လုံးသားခငျြးအမြားကွီးနှီးစပျကွတဲ့သူတှဖွေဈကွတယျ..
အကောငျးဆုံးသူငယျခငျြးတဈဦးလညျးဖွဈတယျ…ရငျဖှငျ့ဖျောရငျဖှငျ့ဖကျလညျးဖွဈတယျ….အသကျအရှယျအားဖွငျ့ ၇နှဈကှာခွားပမေဲ့ ဖူး အတှကျကတော့ သိပျကိုခဈြရတဲ့ လောကကွီးမှာရှိတဲ့ တဈ ဦး တညျးသော အခဈြဆုံး၊ တနျဖိုးအ ထား ရဆုံး နဲ့ အဖိုးထိုကျတနျဆုံး ဘုရားပေးတဲ့ အသ ညျးတုနျးလေးပါ” ဆိုပွီး ရေးသားထား ပါ တ ယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ဘီလီလမငျးအေး တို့ ညီ အဈမနှဈယောကျကို အရငျကထကျခြ ဈပေး ပါ ဦးနျော ။
တိုင်းရင်းသူလေး အဆိုတော် ဘီလီလမင်းအေး ကတော့ ဂီတနယ်ပယ်မှာ အကော င်းဆုံးကြိုးစား လုပ် ကိုင်နေတဲ့ သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Myanmar idol အဆိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ် ပြိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ခင်အားပေးမှု ကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း လ ည်း သီချင်းသစ်တွေကိုဖန်တီး နေပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ကိုင်နေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီလီလမင်းအေး က အသားအရေ ဖြူဖွေးနုဖက်နေသလို တမူထူးခြားတဲ့ အလှ တရားတွေကို ပိုင် ဆိုင်ထားတာကြောင့် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေက လ ည်း အားပေးဝန်းရံနေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ဒါ့အပြင် သူမလိုပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်လည်း ရှိပြီး တစ်ဦးတည်း သော ညီမလေးဖြစ်တာကြောင့် အစ်မဖြစ်က ချစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှာလည်း ဘီလီလ မင်းအေး က ပရိသ တ်ေ တွ ချစ်အားပိုလောက်အောင် ညီအစ်မနှစ်ယောက် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေး ကို တ င်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီပုံလေးတွေနဲ့လည်း ဘီလီလမင်းအေး က ” ကျွန်မမှာသိပ်ချစ်ရတဲ့တစ်ဦး တ ည်းသော ညီ မ လေးရှိတယ်…”SISTERS” are different flowers from the garden. ညီအစ်မတွေ ဆို တာဥယျာဉ်တစ်ခုတည်းကနေပေါက်ဖွားကြတဲ့မတူညီတဲ့ ပန်းနှ စ်ပွင့်ဖြစ်တယ်….. ဒါပေမဲ့နှ လုံးသားချင်းအများကြီးနှီးစပ်ကြတဲ့ သူတွေဖြ စ်ြ ကတယ်..
အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်…ရင်ဖွင့်ဖော်ရင်ဖွင့်ဖက်လည်းဖြစ်တယ်….အသက်အရွယ်အားဖြင့် ၇နှစ်ကွာခြားပေမဲ့ ဖူး အတွက်ကတော့ သိပ်ကိုချစ်ရတဲ့ လောက ကြီးမှာရှိတဲ့ တစ် ဦး တည်းသော အချစ်ဆုံး၊ တန်ဖိုးအ ထား ရဆုံး နဲ့ အဖိုးထိုက်တန်ဆုံး ဘု ရားပေးတဲ့ အသ ည်းတုန်းလေးပါ” ဆိုပြီး ရေးသားထား ပါ တ ယ်။ ပရိသတ်ေ တွလည်း ဘီလီလမင်းအေး တို့ ညီ အစ်မနှစ်ယောက်ကို အရင်ကထက်ချ စ်ပေး ပါ ဦးနော် ။